Maxkamadda Brazilian Supreme Court oo go’aanka ugu dambeeya ka qaadaneysa in dalka Brazil uu marti-geliyo Copa America - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Maxkamadda Brazilian Supreme Court oo go’aanka ugu dambeeya ka qaadaneysa in dalka Brazil uu marti-geliyo Copa America
June 9, 2021 at 09:14 Maxkamadda Brazilian Supreme Court oo go’aanka ugu dambeeya ka qaadaneysa in dalka Brazil uu marti-geliyo Copa America2021-06-09T09:14:58+02:00 CAYAARAHA
(Rio de Janeiro) 09 Juun 2021. Inkastoo ay haatan qabowday dooddii ku qotontay in Brazil ay marti geliso tartanka Copa America sanadkan maadaama xiddigaha xulka Jaalleyaasha sida la sheegay ay ugu dambeyn ogolaadeen inay tartanka ciyaaraan, haddana Maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa qabatay dacwad ku aaddan kiiskaas oo ay soo gudbisay Wasiirad Carmen Lucia oo sidoo kale xubin ka ah maxkamaddaas.
Luiz Fux oo ah madaxweynaha maxkamadda Supreme Court (STF) ee dalka Brazil ayaa guddoomay diiwaanka kiiska ay Lucia ku dooneyso in dalka Brazil uu joojiyo marti-gelinta tartanka Copa America.
Tartanka qarammada qaaradda Koonfur Ameerika ayaa laga soo wareejiyay dalalka Colombia iyo Argentina oo xasillooni darro siyaasadeed iyo sababo xanuunka Korona Fayras la xiriir awgood u qaban waayay tartanka, waxaana xiriirka kubadda cagta Koonfurta Ameerika ee magaciisa loo soo gaabiyo CONMEBOL uu tartankan go’aamiyay in lagu qabto dalka Brazil taasoo ay dood badani ka dhalatay maadaama dalkan qudhiisu uu la tacaalayo xanuunka xaalada xanuunka Koofid19.
Sida laga soo xigtay Globe Esporte, dhageysiga dacwada ayaa bilaaban doona saacadaha soo socda, waxaana maxkamadda sare ee dalka Brazil ay soo saari doontaa go’aankeeda la xiriir in Copa America lagu qabto Brazil.
Dhinaca kale, xaaladaha caafimaad-darro ee ka taagan dalka Brazil awgeed, xisbiga shaqaalaha ee Workers Party (PT) iyo xisbiga hanti-wadaagga Brazil ee Brazilian Socialist Party (PSB) ayaa si cad ah uga soo horjeestay in dalkooda uu marti-geliyo tartankan iyagoo ku andacoonaya inaysan qaabili karin safarro kale oo dibadda kaga imaanaya maadaama ay kasii dari karto xaaladda.
Sidoo kale khubarrada caafimaadka ayaa ka deyriyay in Brazil lagu qabto Copa America iyadoo ay xusid mudan tahay in dalkan ay xanuunka Korona ugu geeriyoodeen 463,000 (afar boqol iyo lixdan & saddex kun) oo ruux, oo ay usii dheertay in kiisaska dadka laga helay Koofid ee dalkaas ay gaarayaan 16.5 milyan (Lix iyo toban milyan & bar) oo kiis.
Isku soo wada duub e, maxkamadda Brazilian Supreme Court ayaa laga sugayaa go’aanka ugu dambeeya maalinta Khamiista ah.
« RW Rooble oo Magacaabay Guddi Kala Shaqeeya Doorashada
Real Madrid oo ka fikireysa inay u dhaqaaqdo garoonka Wanda Metropolitano… (Aqriso xiriirka ka dhexeeya labada naadi, goorta ay kusoo laabaneyso Bernabeu & sababta aysan ugu sii ciyaari karin ADS) »